Kusukela kwesokunxele: uDkt Sudan Hansraj, uDkt Ché Pillay, uDkt David Lokhat kanye noDkt Matthew Akerman.
Izifundiswa ezine zase-UKZN eKolishi YeZolimo, EzobuNjiniyela NeSayensi (i-CAES) ziklonyeliswe ngezindondo ze-2017 Distinguished Teacher Award (i-DTA).
I-DTA ihlonipha imizamo yabasebenzi yokufundisa ngokuzimisela baphinde bakwazi ukwenza ucwaningo nomsebenzi wokufundisa ngokulingene, bezinikele kwezokufunda nokufundisa okusezingeni eliphezulu.
Lezi zifundiswa ezine kubalwa kuzo uDkt Matthew Akerman waseSikoleni seKhemistri NeFiziksi, uDkt David Lokhat waseSikoleni SezobuNjiniyela, uDkt Che Pillay waseSikoleni Sezifundo Ngokuphilayo kanye noDkt Sudan Hansraj waseSikoleni SezeziBalo, Izibalimidanti Nezifundo ZeKhompyutha.
IDini eyibamba Kwezokufunda Nokufundisa kwi-CAES, uSolwazi Naven Chetty wamukele izihambeli emcimbini lapho uSolwazi Ross Robinson eklomelise u-Akerman ngendondo ayibiza ngefanelekile.
U-Akerman usebambe iqhaza elikhulu emisebenzini ehlose ukuthuthukisa ezemfundo eSikoleni njengothisha kanye noMholi Wezokufunda Nokufundisa. Usethuthukise izinsizakusebenza ezintsha zokufundisa ezizolekelela ukufunda, lokhu kuhlanganisa amavidiyo okukhombisa indlelakwenza angesiNgisi nangesiZulu ukuze abafundi abenza unyaka wokuqala bakwazi ukuzijwayeza isimo sase-lebhu yeKhemistri, namavidiyo kanye namanothi omsebenzi wesikole afundisa ngezihloko ezibucayi emazingeni aphezulu.
Uselekelele ekuthuthukiseni amamojuli amasha eKhemistri neFiziksi, wahlanganisa ukubuyekezwa kwangaphandle kwawo wonke amameja e-SCP, waphinde wanikeza uvo lwakhe emaphanelini abuyekezayo.
USolwazi Christina Trois unikeze u-Lokhat indondo yakhe, washayela ihlombe ukudlulisa ulwazi kwakhe ngokuzinikela. U-Lokhat, ofundisa ezobunjiniyela eziyisisekelo kanye nezisebenzisa ukulumbana kwamakhemikhali, usenze ukudluliswa kolwazi kwaba yinto ethokozelwayo ngokwethula indlela yokufundisa yaseklasini ebizwa nge-post-practical assessment.
U-Lokhat waziwa njengomuntu wabantu aphinde abe umqeqeshi nomeluleki ozinikelayo. Ucwaningo lakhe ekudwetshweni kwesilumbanisi makhemikhali, i-optimisation ne-chemical kinetics seluhehe imali eningi, futhi ungumcwaningi osekushicilelwe okuningi ngaye wathola nemiklomelo eminingi.
U-Pillay wamukele indondo abeyiklonyeliswa uSolwazi Ademola Olaniran, ogcizelele uthando nokuzimisela kuka-Pillay ngocwaningo lwakhe lwezinhlelo ze-redoxin. U-Olaniran ugcizelele ukukholelwa kuka-Pillay emsebenzini osezingeni eliphezulu, okubonakala emibhalweni aseyishicilele.
Kubalulekile ku-Pillay ukuqonda ukuthi kuphathwa kanjani ngobuhlakani nokuthola izindlela ezintsha zokusebenza, futhi uyakugqugquzela ukubuzwa kwemibuzo enza abantu bakhulume. Uhlola izindlela zokufundisa ezahlukahlukene, futhi usethule ifomu lokufunda ukuze athuthukise amakhono okucabanga. Uvamise ukuhola izingxoxo emaklasini, aphinde agcizelele ukuqeqeshwa ngendlela yokubuzana.
U-Hansraj, owamukela indondo yakhe kuSolwazi Delia North, unesipiliyoni ekufundiseni izibalo zemfundo zebanga eliphansi kuya ezingeni lobudokotela. Usebhale incwadi yokufunda yabafundi abenza unyaka wokuqala ezifundweni zobunjiniyela ukulekelela abafundi abangenzi kahle, usebenzisa ubuchwepheshe uma efundisa, obuhlanganisa i-website namavidiyo, futhi uzimisele ukuxoxa ngobuhle bezibalo.
U-Hansraj, oseshicilele imibhalo eminingi yokulungiselela izivivinyo yezikole zamabanga aphakeme waphinde wabhala nangokufundisa izibalo, uyisikhulumi esithandekayo kwizingqungquthela zezemfundo e-Afrika yonkana futhi usehlele izingqungquthela ngokufundisa izibalo emanyuvesi kanye nendima edlalwa ukuzimela. u-Hansraj ungumcwaningi nomeluleki oseshicilele kakhulu, usebenzisana nabacwaningi emhlabeni jikelele. Uthanda i-Lovelock and Einstein-Gauss-Bonnet higher curvature theory ye-gravitational field. Usebenzisana kakhulu nomphakathi kanye namakomidi ezezibalo.
Obambe njengePhini Lesekelashansela Kwezokufunda Nokufundisa, uSolwazi Bala Pillay, wavala umcimbi, ebonga abathole imiklomelo ngokubamba iqhaza kwezokufunda nokufundisa e-UKZN.